Ciyaaryahan Axmed Xasan Macaani oo ka hadlay ku biiristiisa Kooxda Horseed %
By Ramzi Yare	 Last updated Mar 8, 2020
Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa sanadkan sameysay saxiixyo waa weyn, waxaana ka mid ah Cabdikariin Qubaaye iyo Axmed Xasan Macaani kuwaaso oo heshiisyo u saxiixay kooxdan.
Wiilasha Horseed ayaa iminka kala sarreynta horyaalka ku jira booska 1-aad iyagoo farqiga goolasha ku haya, waxayna rabaan sanadkan inay gacanta ku dhigan koobka horyaalka oo ay ugu dambeysay qarnigii 20-aad, waxayna awoodooda isugu geyn doonaan inay soo afjaran abaarta ka haysata ku guuleysiga la’aanta horyaalka.
Ciyaaryahankan ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aaddan ku biirista kooxda kubadda cagta Horseed iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin karo.
”Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku soo biiro kooxda faca weyn Horseed, waxaan rajaynayaa inaan kula guuleysto horyaalka iminka soconaya, waxay ii tahay mid i farxad galinaysa inaan xirto maaliyadda kooxda ciidanka xooga dalka ee Horseed.
”Horseed waxaa jooga maamul wanaagsan, ciyaartooy cajiib ah iyo macallinka aan aad u jeclahay Cabdijoon, kaasoo fahansan waxay tahay guusha iyo guuldarrada, waxaan diyaar u ahay inaan qeyb lixaad leh ka qaato guulaha Kooxda Horseed.
Si kastaba ha haatee, ciyaaryahan Axmed Xasan Macaani ayaa ka soo muuqdan doona kulan ay kooxda Horseed la dheeli doonto wiilasha Mogadishu City Club, ciyaar dhici doonta 13-ka bishaan kana tirsan horyaalka Somali Premier League.
Hordhaca: Man United Vs Man City- Wax Walba Oo Aad Uga Baahantahay Kulanka
Man United ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Man City